Cilmi-xeeldheer (Captalt Expert Elaborates) oo ku socda Qalabka Internet-ga ah ee Wareegsan
ee ganacsiyada internetka iyo kuwa horumariya websaydhka. Inkastoo ay daboolayso boqollaal kun oo codsiyada codsiyada, waxaa suurtogal ah inaanay suurtagal ahayn in la doorto barnaamijka ugu fiican ee bilaashka ah ee internetka. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad isku daydaa inaad hesho qalabka ugu fiican oo ugu saxsan ee qalabka wax lagu qoro kaasoo badbaadin doona wakhtiga iyo lacagtaada labadaba.
Halkan waxaan haynaa liis ah qalabkii ugu caansan ee bogga caanka ah.
Waxaa soo saarey Ipswitch Inc. waana mid loogu tala galay daalacayaasha internetka ee kala duwan - outdoor table bases for glass tops. iMacros waxay si sahlan u dari kartaa qoraalka, replay farsamoyaqsan waxayna na ogolaan kartaa inaan qabano hawlaha webka sida uploads, downloads, imtixaanka sawirada iyo qoraallada. Waxaa intaa dheer, waxay ka caawisaa soo dejinta iyo dhoofinta xogta ama feylalka iyo ka soo-saarka websiyada iyadoo la adeegsanayo faylasha XML, PHP iyo CSV. Ka dibna wuxuu kaydiyaa macluumaadka waxtarka leh ee nagu leh macluumaadka u gaar ah ama ilo kale oo la cayimay. Barnaamijkani wuxuu na siiyaa macluumaadka ganacsiga dhabta ah ee ganacsiga oo ka caawiya hawlaha tijaabinta webka.
Waxaa lagu hormariyaa waxaana bilaabay shirkadda Import.io Corporation. Soo dejinta..Io waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee ugu caansan internetka ee internetka. Waxay ufiican tahay shakhsiyaadka iyo ganacsatada labadaba waxayna u ogolaaneysaa dadka isticmaala bogagga internetka inay galaan API-kooda kaliya. Intaa waxaa dheer, import.io wuxuu fududeynayaa horumarinta websaydhka iyo barnaamijyadeeda inay ka soo qaadaan xogta laga soo qaato bogga la rabo. Tiknoolajiyaddeeda gaarka ah waxay u oggolaataa dadka isticmaala inay kaydiyaan xogta qaabab cayiman iyadoo aan wax dhibaato ah.
Scrapebox waa qalab SEO ah oo faa'iido leh oo bilaash ah oo ay isticmaalaan freelancers, horumarinta iyo shirkadaha SEO oo dhan adduunka oo dhan. Waxay ka caawisaa shabakadaha internetka iyo blogs iyada oo aan wax arin ah, iyo sifooyinka ugu muhiimsan ee ah mashiinka search engine, keywords keywords, goosashada wakiilada, sawirada faallooyinka, iyo jeegleys link. Qaar ka mid ah xulashooyinka caanka ah ayaa eegaya darajooyinka bogga, abuurka RSS, quwadda laga soo qaado, raadso domain aan diiwaangashan, iyo kuwa kale. Scrapebox wuxuu u shaqeyn karaa adiga oo ah SEO-gaaga shakhsi ahaaneed wuxuuna si otomaatig ah u shaqeyn doonaa hawlahaaga ka soo uruurinta URL-yada. Waxay samayn doontaa cilmi-baaris tartan ah, dhisida xiriiryo, sameynta hantidhawrka goobta iyo wax badan oo badan oo adiga kugu saabsan adigoon wax dacwad ah samayn.
Digniintu waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee shabakadda. Tani waxay u dhaqantaa qaabka ugu dhakhsaha badan iyo heerarka sare ee shabakada oo waxaa loo isticmaalaa in si fudud loo soo saaro xogta habaysan iyo kuwa aan habaysanayn. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu shaqeeyo macluumaadka, dhirta xogta, iyo sameynta kaydka taariikhiga ah. Gawaarida waxaa loo yaqaanaa taageerada la dhisay oo waxay ka caawisaa in laga soo saaro macluumaadka labada HTML iyo XML. Waxaa intaa dheer, taageerada xoojinta waxay noo ogolaaneysaa inaanu ku xirno shaqadeena iyadoo la isticmaalayo calaamado gaar ah iyo API-ga si fiican loo qeexay. Mozenda Inc. waa mid ka mid ah qalabyada ugu fiican ee loo adeegsado shabakada, waxana ay u fududeyneysaa noo sahlanaan ka soo rogo boggaga kala duwan. Waxay qabanqaabisaa xogta la uruuriyay oo waxay u qaybisaa qaybo kala duwan iyadoo lagu salaynayo shuruudaheenna iyo waxa laga filayo. Diiwaanka kaydka buug-kaydka qalabkani wuxuu hayaa faylashadeenna badbaadsan ee dadka isticmaala internetka iyo kuwa internetka. Waa mid sax ah oo sahlan in la isticmaalo barnaamijka oo la yimaada dayactir hooseeyo, wuxuu ballan-qaadayaa saxsanaanta xogta, wuxuu na siinayaa inaan diiradda saarno falanqaynta, waxaanan siinaa fursado daabacan oo ku habboon oo lagu kalsoonaan karo. Faylasha la soo saaray waxay ku yimaadaan qaabab sida CSV, Txt, XLS, iyo kuwo kale.